Posted by pandora at 11:48 AM
ဟဲဟဲ..ဗီးနပ်စ် ဂြိုဟ် သား တွေနဲ့..မားစ် ဂြိုဟ် သား တွေ..ကမ္ဘာဂြိုဟ် မှာ..လာ တွေ့ကြ တယ် ဆို တာ..ယုံ ပြီ မဟုတ်လား..
အဲတာ သဘာဝကို ဖေါ်ပြနေတာဘဲ။ ဒီပလိုမက်တစ် နည်းဖြင့် အဖြေပေးခြင်းသည်၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အ ဖြေမတတ်လျှင် ရေငတ်လိမ့်မည်။
လူမိုက်မှ မဟုတ်တာ... ဘာလို့မေးရမှာလဲကွယ် ...
မိုက်တယ် ... ဘယ်တော့မှ မမေးဘူး :P
တခါတလေကျတော့ တကယ်ကြိုက်တာနဲ့၊ သင့်တော်တာ တထပ်ထဲကျတတ်ပါတယ်ပန်ရယ်။
ကြည့်ပြီးသား ရုပ်ရှင်တစ်ကားရဲ့ မူရင်းဝတ္ထု (သို့ ) အဲဒီကားရဲ့ ဇာတ်ညွှန်း ကိုဖတ်လိုက်ရသလိုပါဘဲ။
ကိုယ်တို့တွေလည်း လူတော်တွေချည်း တွေ့နေရတာပဲ မဟုတ်လား. ...
အဲဒါ သင့်တော်တာကိုပဲ ကြိုက်ခဲ့မိတာကိုး....
မကေ.. ကမ္ဘာဦးကတည်းက တွေ့ခဲ့ကြတဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေ..ဟဲဟဲ
ကိုတင်ထူး.. ဟုတ်ပ။ ဒီပလိုမေစီ အရေးကြီးတာပေါ့။
ကိုစိုးထက်.. မမိုက်ပါဘူးဆိုမှ မိုက်တယ်ပြောနေပြန်ပြီ
မတန်ခူး... ဟုတ်ပါတယ်။ ငြင်းပါဘူး။ ဒါနဲ့ တခါတလေပဲလား။
မနိုင်... အားပေးတာ ကျေးဇူး။ မင်းသားမင်းသမီး မျက်စိထဲမြင်သွားရောလား။ ၀တ္တုလို့ လေဘယ်လ် တပ်ထားတယ်လေ။ factတွေနဲ့ fiction နဲ့ မရောနဲ့လေ။ ဟဲဟဲ..
မခင်မင်းဇော်.... နေဦး. ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။
(သို့) အဖျားတက်သွားတယ်လို့လဲ ထင်လိုက်လို့ရတယ်နော် မမပန်..
အစိမ်းရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ၈၈ နောက်ပိုင်းမှာလားဟင်။
ဒါက ဘာဘွဲ့ ခေါ်မလဲ။ အချစ်ဘွဲ့လို့ ဆိုရမယ်ထင်တယ်။
အင်းလေ.. လူမိုက်မှ မဟုတ်တာ... ဘာလို့မေးရမှာလဲ...
အဲဒီမေးခွန်းကြီးက ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ် ကြိုးကွင်းစွပ်မယ့် မေးခွန်းကြီး..။ :P
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူနည်းသူ့ဟန်နဲ့ ချစ်တာပဲဗျာ..အကုန်လုံးရဖို့ လောဘမကြီးပါနဲ့ဗျာ..